थाइल्याण्डकाे सडकमा बाँदरको ‘ग्याङ फाइट’, घण्टौँ ट्राफिक जाम - AAjakokhaber
No 1 News Portal From Nepal
थाइल्याण्डकाे सडकमा बाँदरको ‘ग्याङ फाइट’, घण्टौँ ट्राफिक जाम
एजेन्सीः थाइल्याण्डमा १ सयभन्दा बढी बाँदरका दुई गुटबीच लडाइँको एक भिडियो बाहिर आएको छ। भिडियोमा बाँदरहरूको ठूलो झुण्ड सडकमा एकआपसमा लडिरहेको देख्न सकिन्छ। यसबीच सडकमा यात्रा गरिरहेका मानिस घण्टौँ जहाँको त्यहीँ रोकिएका थिए।
यस ‘ग्याङ फाइट’ का दौरान बाँदरहरूको आवाज यति ठूलो थियो कि मानिसहरु डराएर गाडीभित्र नै लुकेर बसेका थिए। यो घटना थाइल्याण्डको चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र लोपबुरीको रहेको बताइएको छ । यो सहर बुद्धको प्राचिन मन्दिरहरूका लागि चर्चित रहेको छ।
भिडियो रेकर्ड गर्ने एक व्यक्तिका अनुसार यो घटना लोपबुरीको फ्रा कान मन्दिर र प्राङ्ग स्याम यटको छेउछाउको हो। उनी आफ्नो घरको तेस्रो तल्लामा सरसफाइ गरिरहँदा बाँदरहरू कराएको आवाज सुनेका थिए। जब उनले बाहिर हरे, त्यहाँ १ सय भन्दा बढी बाँदरहरूको दुई गुट सडकमा एकआपसमा भिडिरहेका थिए। यो भिडन्त करिब १ घण्टासम्म चलेको थियो। यसका कारण घण्टौँ ट्राफिक जाम भएको थियो। यसअघि सन् २०२० को मार्चमा पनि यस्तै घटना देखिएको थियो।
Previous के रेशम चौधरीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको हो ?
Next विजय शाहीले आफैले किन फिँजाए मृत्युको हल्ला ?
मन्त्रिपरिषद विस्तार भोलिसम्म हुन्छ : प्रवक्ता महरा
चन्द्रागिरीमा ट्रान्सफर्मर चोरी गर्दा गर्दै पक्राउ
म सत्र वर्षीय युवती हुँ, म हिस्टेरिया रोगले ग्रसित छु, बिहे गरेपछि यो रोग निको होला त ?
१०४ अंकले बढ्यो नेप्से, दर्जन बढी कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढ्यो
Site Developed by : Gadget Dai!